Mpanamboatra sy mpamatsy Sheet Aluminium miisa 1100 | Aluminium Vaovao
1100 takelaka aluminium dia iray amin'ireo solontenan'ny ravina alimina madio 1 andiany, izay ampiasaina amin'ny indostria. Ny atin'ny aluminium 99,00% dia mahatonga ny takelaka aluminium 1100 hitazona ny tombony azon'ny alimina indrindra, ohatra. an'ny alimo madio, fanoherana ny harafesina avo lenta, fitondra-tena tsara sy fitarihana hafanana. Mandritra izany fotoana izany, miaraka amin'ny fanampiana ny ampahany kely amin'ny singa alikaola Cu, ny fanodinana sy ny fanodinana ny tampon-taratasy 1100 vita amin'ny alimo ary ny toetran'ny firaka hafa dia azo ampiasaina tsara kokoa ho an'ny fiara fitehirizana lehibe, fitehirizana sakafo sy simika ary fitehirizana. fitaovana, vokatra vita amin'ny metaly, fivorian'ny vy, taratra, solosaina sns
Miaraka amin'ny fanampian'ny haitao avo lenta, afaka mamokatra karazan-tsoratry ny aluminium rehetra misy fenitra isan-karazany amin'ny EN isika ary mifehy ny dingana rehetra amin'ny famokarana ary mijery ny loharanon-karena rehetra.
Firaka sy anarana ： 1100 aluminium Sheet / Plate
Temperème: O / H12 / H22 / H14 / H24 / H16 / H26 / H18 / H28
Hateviny: 0,1 mm ka hatramin'ny 20 mm
Fonosana: Maso amin'ny rindrina na Eye to sky amin'ny alàlan'ny paleta hazo mahazatra
Famonosana lanja: 1 ka hatramin'ny 3 taonina
Ny fiasa amin'ny takelaka 1100 Aluminium
1. fanoherana tsara harafesina. Ny takelaka vita amin'ny aliminioma 1100 dia manana fanoherana tsara ny harafesin'ny atmosfera (ao anatin'izany ny etona indostrialy sy etona an-dranomasina) ary harafesin'ny rano. Ho fanampin'izany, afaka mahazaka ny harafesin'ny ankamaroan'ny asidra sy ny zavamananaina izy io.
2..Ny fikojakojana sy ny famolavolana.1100 vita amin'ny aliminioma dia afaka mamokatra fitaovana aluminium maro samihafa amin'ny alàlan'ny fanodinana tsindry, izay afaka mifanaraka amin'ny hafainganam-pandehan'ny ankamaroan'ny fitaovan'ny milina amin'ny famadihana, ny fikosoham-bary, ny mankaleo, ny fikolokoloana ary ny fanodinana mekanika hafa. Ankoatr'izay, ny bobongolo tsara of1100 Ny ravina aliminioma dia ahafahana mihodina ho ravina sy foil, na sintonina ho fantsona sy tariby, sns.
3.Tsy misy brittleness amin'ny maripana ambany.1100 sheetbelow0 aluminum, rehefa mihena ny mari-pana, ny heriny sy ny famolavolana azy dia tsy hampihena, fa hitombo.
4.The1100 aluminium sheettrength dia ambany, tsy azo hamafisina amin'ny fitsaboana hafanana, ary ny fananana fanapahana dia ratsy.
Ny fampiharana ny takelaka Aluminium 1100
1100 takelaka aluminium dia alim-pito vita amin'ny indostrialy, izay matetika ampiasaina amin'ny faritra mitaky fahombiazana amin'ny famolavolana sy ny milina, fanoherana ny harafesina avo ary tsy misy tanjaka avo. Eto, ny firakotra aluminium-H24 an'ny alimo Aluminium vaovao Co Ltd ho an'ny varavarana dia nasiana patanty ao Shina. ary ampiharina tsara amin'ny varavaran'ny bisy.
Fampiasana 1: 1100 takelaka vita amin'ny aliminioma dia azo ampiasaina amin'ny fitoeran-drano lehibe fitehirizana, fametrahana indostrialy sakafo, fanosotra lalina, satroka tavoahangy, rindrina ambainy misimisy, atin'ny fiara fitateram-bahoaka, vavahady fiara / bisy maotera, haingon-trano, mpivarotra hafanana, aliminioma ho an'ireo mpanova, milentika amin'ny hafanana, fitaovana , sns.
Fampiasana 2: 1100 aluminium sheet / foil / coil material dia be mpampiasa amin'ny plastika aluminium plastika, foil elektronika, foil batterie, sns.
Teo aloha: orinasa ambany vidiny 5754 Aluminium Sheet - Mirror Surface Aluminium sheet - Aluminium Vaovao
Manaraka: Takelaka aluminium 1070
Takelaka / takelaka aluminium 1050